Ary raha mba tsy malagasy, hono, isika e?! – Malag@sy Miray
Rehefa natao ny fanadihadiana tsotsotra dia misy ireo malagasy no tsy mahatsiaro ny tenany ho afrikana. Misy ihany koa ireo izay mahatsiaro fa mitovy amin’ny afrikana saingy tsy mponin’ny « kaontinanta » afrikana.
Tadidiko tsara nisy fotoana ny firenena malagasy tao anatin’ny folo taona latsaka izay dia voalaza fa tsy mpikamban’ireo firenena afrikana ka maro ihany ireo malagasy no tsy dia niraharaha loatra izany.
Aleo ajanona aloha iny resaka afrikana iny fa ny fanontaniana dia ny hoe « ary raha mba izao moa ny malagasy no tsy mponin’i Madagasikara fa firenena hafa dia mba firenena iza re no hita fa metimety aminy? »
Tsy resaka fitadiavana zom-pirenena hafa no resahina eto na fanambadiana amin’ny olona avy amin’ireo firenena hafa fa resaka malagasy tsy vaky volo miray hina sy miara-miasa ary miara-miaina.
Raha tany amin’ny firenena tatsinana ohatra dia mety voakajy ny mahamalagasy ka voakolokolo ara-dalàna ireo soatoavina izay dradradradraina etsy sy eroa. Mety nivoatra be ireo karazana hai-ady mampiavaka antsika, asa ny morengy ohatra. Mety nahay nanara-dalàna kokoa angamba isika?! mety tia niasa ihany koa ny ankamaroan’ny malagasy ary na ny mpiasam-panjakana aza dia nanaika mora foana ny fiantsoana azy hoe mpiasam-bahoaka.
Raha tany amin’ny firenena tandrefana indray kosa dia mety ho tia nikarokaroka sy tia fandrosoana amin’ny lafiny rehetra. Noho izany dia tia miasa sy mikendry ny fahatafitana amin’ny fomba rehetra. Mety samy naka ho azy ihany koa anefa satria dia ho tsapa fa ny herin’ny tena samy irery ihany no ahafahan’ny tena mihinana. Raha tany amin’ny firenena tandrefana ny malagasy dia sahirana satria mila miasa mafy mila miasa be ihany koa mba ahafahana mitsotsotra aoriana kely.
Raha tao anelanelan’ireo firenena afrikana mainty sy firenena arabo isika dia tena mety sahirana noho ny hafanana satria hafanana tsotsotra et Madagaiskara aza dia efa mahakamo. Mety sahirana niady sisin-tany sy niady an-trano marina koa isika ary mety tsy hahafantatra izay tena mahasoa ny vahoaka sy ny firenena.
Ny marina dia ny mpitondra ihany no mamolavola ny vahoakany ary na taiza na taiza raha mbola tsy tia mianatra sy miasa na koa mikaroka ireo fomba madio hitadiavana vola isika malagasy dia mbola ho ratsy noho izao trangan-javatra ankehitriny izao no miandry antsika.
Dia raha hilamina marina tokoa ny eto an-tanindrazana dia rahoviana indray no hiverina ny fanakorontanana sy ny fiakarana diso tafahoatra ny vidim-piainana? Sa izao kosa no lazaina fa farany? akaiky ilay farandro?